Shiinaha Iskuxirayaasha Fiyuusyada Iskuxirayaasha iyo alaabada | Mersen
Kahortaga culeyska xad dhaafka ah iyo wareegga gaaban ee khadadka korantada (nooca gG), sidoo kale waxaa loo heli karaa ilaalinta qaybaha semiconductor iyo qalabka ka hortagga gaagaaban (nooca aR) iyo ilaalinta matoorrada (nooca aM). Lagu qiimeeyay hadda illaa 125A; Soo noqnoqodka shaqada 50Hz AC; Awoodda qiimeynta jebinta illaa 100kA, U hoggaansan GB 13539 iyo IEC 60269.
Moodooyinka. cabirka, qiimeynta waxaa lagu muujiyay Jaantusyada 1.1 ~ 1.4 iyo Shaxda 1.
Hore: Isku xidhka isku xidhka isku xidhka bolt